Moon Lovers - Scarlet's Heart : Ryeo ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel August 30, 2016
ဒီဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင်ဖြင့် မထွက်ခင်ကတည်းက နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဆိုလဲ မှားနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး ... ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသား ၆ ယောက် နဲ့ မင်းသမီးချောလေး တယောက် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ ....
K မင်းသားလို့လူတိုင်းသိများပြီး အီဂျီမဲ သူခိုးကားမှာအရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မင်းသား Lee Jun Ki က စတုတ္ထမင်းသား အဖြစ်လည်းကောင်း ... Kang Ha Neul က ရှစ်ယောက်မြောက် မင်းသားလေး အဖြစ်လည်းကောင်း ... Hong Jong Hyun , Byun Baekhyum , Nam Joo Hyuk , Ji Soo တို့က သုံးယောက်မြောက် ၁၀ ယောက်မြောက် ၁၃ ယောက်မြောက် ၁၄ ယောက်မြောက်မင်းသားများ အဖြစ်လည်းကောင်း အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့်အပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့အဆိုတော်မလေး IU ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကိုရီးယားနန်းတွင်းဇာတ်လမ်းတွဲ " Moon Lovers : Scarlet Heart Ryeo " မထွက်ခင်ထဲက လူတိုင်း ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားနေပြီး ... လူတိုင်းအရမ်းလည်းကြည့်ချင်နေတဲ့ ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ... Chinese Novel ကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး အစအဆုံး ရိုက်ကူးပြီးမှထုတ်လွှင့်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ... တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ - ၂၁ ရာစုက ကောင်မလေး.. ဂိုဟေဂျင်း ( IU ) ဟာ ကလေးတစ်ယောက်ရေနစ်တာကိုဆင်းကယ်တဲ့အချိန် ... ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နေကြတ်ခြင်းဖြစ်ပွားသွားပြီး ... ၉၁၈ ခုနှစ် ထယ်ဂျိုဘုရင်လက်ထက် ဂိုလျောခေတ် ရဲ့ ဆုန်းဒက်ပြည်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ် ... ဟေဆိုးလို့ခေါ်တဲ့ ၁၆ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးအဖြစ်နဲ့ မင်းသားတွေရေချိုးနေတဲ့ ရေကန်ထဲမှာ ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါ.. ငယ်ငယ်ချောချော မင်းသားလေးတွေနဲ့ ဘယ်လို ပြသနာတွေဖြစ်ကြမလဲ ?
အဲ့မင်းသားတွေထဲကမှ.မျက်နှာတစ်ခြမ်းကိုဖုံးထားတဲ့ လေးယောက်မြောက် မင်းသားဝမ်ဆို...( Lee-Joon Gi) မြေခွေးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လူတိုင်းကကြောက်ရတဲ့ မင်းသားနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး မေတ္တာသက်ဝင်သွားမှာလဲ... ချောမောတဲ့ မင်းသားတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး ... နန်းတွင်း ထီးနန်းလုတဲ့ အရှုပ်တော်ပုံတွေကြားမှာ ... ဟေဆိုးတစ်ယောက်ဘယ်လို ဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာ ... ပရိတ်သတ်ကြီးကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှလိုက်ပါဦး..နော်
Genre : Fantasy , Historical , Melodrama , Romance , Youth
Translator : ^Amy^
Episode2( Mediafire Link )
Episode3( Mediafire Link )
Episode4( Mediafire Link )
Episode5( Mediafire Link )
Episode6( Mediafire Link )
Episode 6( pcloud Link )
Episode7( Mediafire Link )
Eposide 7( pcloud Link )
Episode 8 ( Mediafire Link )
Episode9( Mediafire Link )
Episode 10 ( Mediafire Link )
Episode 11 ( Mediafire Link )
Episode 20 ( END ) ( V.I.P Link )
Episode 20 ( END ) ( pcloud Link )
Fantasy Historical Korea Melodrama Romance Youth
Labels: Fantasy Historical Korea Melodrama Romance Youth
gu gu 21 August 30, 2016 at 7:03 PM
Thzalot epi2and3also waiting
Mee lay August 30, 2016 at 8:33 PM
Lwin Hay Man Oo August 30, 2016 at 9:06 PM
Lwin Hay Man Oo August 30, 2016 at 9:08 PM
Uri Baekhyuneeee!!!! the best!! the most cutest prince in the world......Love you so much Bae...
Kaishar jongin August 31, 2016 at 10:39 PM
please mediafire link....T_T
Kimjun Hee September 2, 2016 at 2:13 PM
gu gu 21 September 2, 2016 at 3:38 PM
Louisa September 2, 2016 at 8:00 PM
THANK YOU SO MUCH FOR THE MEDIA FIRE LINK, ADMIN NIM!! I REALLY APPRECIATE IT. ALSO IT WOULD BE GRATEFUL IF YOU UPLOAD W TWO WORLDS WITH MEDIA FIRE AS WELL. I MEAN PREVIOUS OLD EPISODES. I COULDN'T DOWNLOAD WITH PCLOUD. MY DEVICE DOESN'T WORKS. BUT ANYWAYS THANK YOU SO MUCH ONCE AGAIN FOR MEDIA FIRE LINK!!! WORK HARD! God bless you.
Min ChitThu September 4, 2016 at 7:35 AM
Kimjun Hee September 5, 2016 at 7:13 PM
4 ထွက်နေပီစားတန်းထိုးပေးပါဗျို့ ThzQ😎
Mee Mee September 7, 2016 at 8:38 PM
Nest next next i can't wait to see it ☺ ☺ 😍😍
Mee Mee September 7, 2016 at 8:39 PM
May Exo Thant September 7, 2016 at 11:57 PM
Thanks u so much!! This is my favourite! !
May Exo Thant September 7, 2016 at 11:58 PM
Unknown September 9, 2016 at 12:50 AM
Thank you so much for mediafire link. <3
Nyi zaw September 13, 2016 at 8:00 PM
Kaishar jongin September 15, 2016 at 2:38 AM
please media fire link for ep 6...
please admin... T_T
H .virus September 13, 2016 at 8:48 PM
H .virus September 14, 2016 at 8:25 PM
Kaishar jongin September 14, 2016 at 8:33 PM
Kaishar jongin September 14, 2016 at 8:34 PM
ep6media fire link
soewin oo September 14, 2016 at 10:05 PM
မြန်မြန်လေ တင်ပေးပါ ကောင်းခန်းရောက်နေပြီး fighting 😬😁
May Exo Thant September 15, 2016 at 12:55 AM
Thanks admin team..waiting for next episod...ep 7
May Exo Thant September 15, 2016 at 12:56 AM
Stephen The Great September 15, 2016 at 10:09 AM
ဖန်.တို.ရေ...ဒီ Blog လေးက Link တွေ ကို adf.ly မခံပဲ ရိုးရိုး ချ ပေးထားတာ တွေ.တော. တော်တော်အံသြမိတယ်... ဘာနေရာကများအကျိုးမြတ် ရ မလဲလို.လည်းစဉ်းစားမိတယ်...
ဒီလိုမျိုးဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ပေးတဲ.သူအားလုံးရဲ. စေတနာသက်သက်ကို အခု ရေးထားတဲ. Comment မြင်တဲ.သူအားလုံး ကျွန်တော်နဲ.အတူ အသိအမှတ် ပြုကြရအောင်ဗျာ ...
soewin oo September 15, 2016 at 10:51 PM
Kaishar jongin September 15, 2016 at 8:49 PM
please media fire link...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
H .virus September 15, 2016 at 10:29 PM
thank for ep7
Unknown September 16, 2016 at 7:18 PM
Please admin, ep7 is not match speak and Myanmar Subtitle, thanks for kindly looking us, pls make it match of next ep for us.
Nyi zaw September 16, 2016 at 10:14 PM
အပိုင်း7က အဆင်မပြေဘူးနော်....စကားပြောတာနဲ့
Stitch Baby September 17, 2016 at 5:11 AM
Pcloud နဲ့download လုပ်လို့မ၇လို့ပါ
H .virus September 18, 2016 at 11:32 PM
Nyi zaw September 21, 2016 at 5:22 AM
H .virus September 21, 2016 at 8:30 PM
Stitch Baby September 23, 2016 at 4:11 AM
Kaishar jongin September 25, 2016 at 9:59 PM
thanks alot your media fire link...
htun October 2, 2016 at 2:54 PM
PYAE Thu October 4, 2016 at 8:10 AM
Kaishar jongin October 10, 2016 at 8:55 PM
media fire link... please
BO BO October 14, 2016 at 4:06 AM
Phyoe Pyae Sann Myint October 21, 2016 at 7:04 PM
Episode 17 Please... Waiting For This..
Thandar Win October 27, 2016 at 9:31 PM
Aung Khaing November 3, 2016 at 10:31 AM
Episode 15 က ဒေါင်းမရလို့ပါ
Unknown May 31, 2017 at 10:19 AM
Ep. 15 Pcloud link please.